Ngomhla wama-20 ku-Epreli iZodiac -Ubuntu obupheleleyo beHoroscope - Imiqondiso Yeenkwenkwezi
Eyona Imiqondiso Yeenkwenkwezi Ngomhla wama-20 ku-Epreli iZodiac yiTaurus-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope
Ngomhla wama-20 ku-Epreli iZodiac yiTaurus-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope
Uphawu lwe-zodiac ngo-Epreli 20 yiTaurus.
Uphawu lweenkwenkwezi: Inkunzi. Umqondiso weBull imele abantu abazalwe ngo-Epreli 20-Meyi 20, xa iLanga lifakwa eTaurus. Iphakamisa ubuchule, ukomelela, ukuzithemba kunye nobuninzi.
Inkqubo ye- IKhwezi leTaurus , enye yeenkwenkwezi ezili-12 ze-zodiac isasazekile kwindawo engama-797 sq degrees kwaye ububanzi bayo bubonakala ngama-90 ° ukuya kwi-° °. Inkwenkwezi eqaqambe kakhulu yiAldebaran kwaye amaqela angabamelwane bayo yiAries eNtshona naseGemini eseMpuma.
Inkunzi yenkomo ibizwa ngegama elivela kwisiLatin Taurus, uphawu lwe-zodiac ngo-Epreli 20. E-Italiya ibizwa ngokuba yiToro ngelixa eyaseSpain bayibiza ngokuba yiTuro.
Uphawu olwahlukileyo: iScorpio. Oku kufanelekile kukuvumisa ngeenkwenkwezi kuba kubonisa ukuba intsebenziswano phakathi kweempawu zelanga zeTaurus kunye ne-Scorpio ziluncedo kwaye zigqamisa ubuhle kunye neemvakalelo.
Ukuziphatha: Kulungisiwe. Inika ubukroti kunye nolawulo olukhoyo kubomi babo bazalwe ngo-Epreli 20 kwaye banobuntu ngokubanzi.
Indlu elawulayo: Indlu yesibini . Oku kuthetha ukuba abantu baseTaurian baphenjelelwa kabini kwimfuno yabo yobuqu kunye nobomi bobutofotofo njengoko le ndlu ijongana nayo yonke into ebalulekileyo emntwini ebomini.
Umzimba olawulayo: UVenus . Le planethi ibonisa ubuhle kunye nononophelo kwaye ikwacebisa indalo yokonwaba. UVenus umele amandla obufazi aphikisana namandla obudoda eMars.
Isiqalelo: Umhlaba . Le yinto ezisa ulwakhiwo kunye nemvo yokusebenza kubomi babo bazalwa phantsi kwe-20 ka-Epreli zodiac. Umhlaba unxulunyaniswa nezinye iimodeli ezintathu zezinto okanye ubushushu.
Usuku lwethamsanqa: uLwesihlanu . Olu suku luphantsi kolawulo lweVenus kwaye luphawu lwesisa kunye nomtsalane. Ikwabonakalisa imeko elungileyo yabantu baseTaurus.
Amanani anethamsanqa: 2, 9, 14, 18, 24.
Ulwazi oluthe kratya ngo-Epreli 20 Zodiac ngezantsi ▼
Nge-8 kaSeptemba i-Zodiac yiVirgo-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope
I-Rooster Man Horse Woman ixesha elide ukuhambelana
inyanga ekubonakaleni komfazi kwi-aquarius
Uphawu lweZodiac ngo-Okthobha 27
indlela yokwenza nendoda enomhlaza
loluphi uphawu ngoJuni 22
luyintoni uphawu lwe-10 zodiac
Uphawu lweZodiac lwangoSeptemba 8